Olona luhlu lubalaseleyo lwe "Geeks" okanye abathandi betekhnoloji | Iindaba zeGajethi
Olona luhlu lubalaseleyo lwe «Geeks» okanye abathandi betekhnoloji
Uhlobo olutsha lubonakala ngathi lufikile kwihlabathi lothotho lukamabonwakude, eneneni sithetha ngothotho lwe- «Geek», ezo ngcelele zinomxholo ohlekisayo okanye obhaliweyo, abathi abantu abaninzi bazive bengaqhelananga nawo, okanye oko kudala ukudideka. , kodwa loo nto isenza sincume nabanye abasebenzisi kwigama ngalinye "elinekhowudi". Kwaye kunjalo ngokufika kweminyaka eyadlulayo Ingcingane ekulu kakhulu, into esiyaziyo njenge «geek series» yazalwa, uhlobo oluya kude ngaphaya kwamashwa, uthando okanye uloyiko lwakudala, uthotho olwenziwe ngabasebenzisi abaziqhelileyo nemeko yeGeek, kwaye ngokumangalisayo bafumana ulwamkelo oluninzi. Siza kwenza udityaniso oluncinci lwe "geek uthotho" oya kuthi ube nexesha elimnandi ngalo.
Uhlobo lwe "geek" okanye "nerd" luya luthandwa ngakumbi, ababhali beempapasho bayavuselelwa, kwaye ngale ndlela babandakanya iigags ezithi zivuse umdla wethu onzulu, njengelaptop Alienware Ohlala esebenzisa uSheldon Cooper okanye ukukhankanywa rhoqo kweSiri kunye nezinye iisoftware kuthotho oluninzi, nkqu kwi Ukhohlakele Ukunikezelwa kweli xesha lokugqibela kukhankanywe ezininzi yingxubuwa, isicelo "sokuhlangana" nabantu abathandwayo kwihlabathi liphela.
1 Ingcingane ekulu kakhulu
2 iSilicon Valley
3 Mnu. Robot
4 Nciphisa Umlilo
6 Isihlwele se-IT (i-IT)
Ingcingane ekulu kakhulu
Kuya kufuneka siqale ngeklasikhi, yiminyaka eli-9 uSheldon Cooper kunye nenkampani bebehamba nathi. Uthotho lwabalinganiswa babo bane zizazinzulu ezinezobugorha ezivela kumasebe ahlukeneyo, anothando lwemidlalo yevidiyo kunye netekhnoloji, ajoyine aboyikayo UPenny, i-blonde eyothusayo oza kubona icala elihlekisayo lala madoda. Ukongeza, uSheldon, ophambili ophambili, uneentsilelo ezinkulu, ezibangela imeko yoxinzelelo, "nkqonkqoza, nkqonkqoza, uPenny…".
Kum, enye yezona zinto zihlekisayo, ukongeza, isebenzisa ithuba lomsebenzi kaRichar Hendricks, injineli emileyo, Senze sibone ukuba kunzima kangakanani ukwenza inkqubela phambili eSilicon Valley, umhlaba wegolide kwinkulungwane ye-XXI. Ukongeza, amanani abalulekileyo aphuma kwihlabathi lobuchwephesha enza ii-cameos kolu ngcelele kwaye iinkampani ezinje ngeApple kunye noGoogle zimelwe ngokomfanekiso.
Apha sifumana iintlobo ezahlukeneyo, Ukungathandabuzeki okumangalisayo kwinqanaba le-hacker onesifo sokuphazamiseka esimenza ukuba aqalise iziyobisi kunye nokuba yedwa. Olu luhlu luthatha ukujika okungxamisekileyo okunokubangela ababukeli babe nomsindo, lolunye lolo thotho uluthandayo okanye uluthiyileyo, kodwa kufanelekile ukulunika ithuba elifanelekileyo.
Uthotho olucetyiswayo ngoogxa Microsiervos Oko kusibonisa ukungena kunye nokuphuma kwamandla eshishini kunye nokhuphiswano kwicandelo lobuchwepheshe. Kuyo yonke le nto ayisebenzisayo Kukwakho nemizekelo yoyilo lobuchwephesha kunye nokudalwa kwetekhnoloji yokusika, ezinokubangela umdla kakhulu kubathandi be-elektroniki kunye netekhnoloji yabathengi ngokubanzi.
Ukujonga okunzulu kwitekhnoloji. Kwi Black Mirror iziqendu azixutywanga, azihambelani ngokungqongqoNangona kunjalo, uninzi lwazo zisetyenziselwa ukusenza sibone ukuba itekhnoloji ibuchaphazela njani ubomi bethu, ngamanye amaxesha ikhupha ezona zinto zimbi kuthi. Inikwe amatyeli aliqela kwaye inomkhosi olungileyo wabalandeli.
Isihlwele se-IT (i-IT)
Kolu ngcelele lwesiNgesi sinokubona ukuba njani baxuba ikamva lesayensi ezimbini zekhompyuter ezivela kwinkampani enengeniso ephantsi kunye nomqeshwa weHuman Resources ngaphandle kwembono encinci yetekhnoloji. Iiseshoni zokuhlekisa ezingaqhelekanga ezenzeka kolu ngcelele, mhlawumbi zibekwixesha elithile.
Kucacile ukuba sishiya uthotho kumbhobho, kubalulekile ukukholisa wonke umntu, kwaye ngokuqinisekileyo uyazi uthotho olumnandi lwe «Geeks» ofuna ukwabelana nathi, ke siyakumema ukuba usebenzise ibhokisi yezimvo ukwabelana ngeyakho, okanye thatha ithuba kuTwitter wethu ukuba usixelele ukuba ucinga ntoni ngothotho olutsha olubukeleyo, ngaloo ndlela sinokufumana uthotho ngakumbi kwesi sihloko kwaye siqhubeke nokwabelana ngaso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Olona luhlu lubalaseleyo lwe «Geeks» okanye abathandi betekhnoloji
I-Apple irejista ilungelo elilodwa lomenzi eliza kuvumela ukufumana i-iPhone ukuba icinyiwe